uKusekwa kwe Qembu le Grandmothers Against Poverty and Aids (omakhulu abachasene nentlupheko nengculaza)
uAlicia Mdaka ubalisa ibali lokusekwa kwe GAPA (Grandmothers Against Poverty and Aids) nokuba ibuchukumise kanjani ubomi bakhe.
Iqumbu loku Xhasana
uNontlalontle owayebona intombi yam u Phyllis wamxelela ngenye imini, uze nomama wakho apha. Kufuneka ahambe imihlangano yeqembu lokuxhasana.’ Ngelo xesha u professor Monica Ferreira nabanye abasuka kwi Yunivesithi yase Kapa (UCT) babesenza izifundo zabo zophando ngobomi boo makhulu eMzantsi Afrika. Lo Nontlalontle wandixelele okokuba ndinxulumane nabo ndingene iqembu lokuxhasana abalicebayo.
Eli ke yayiliphulo lokunceda omakhulu emveni kokuva ngobomi bethu. Saqala iqembu lokuxhasana emveni kwesi bhedlele iMichael Maphongwana eKhayelitsha, cebu kuhle emapoliseni. Ekuqaleni yayingo makhulu abasixhenxe kwelo qembu. Kweza abathathu, saba lishumi. Saqokolela I R10 kumntu ngamnye ze savula iakhawunti yebhanka egameni le GAPA, Grandmothers Against Poverty and Aids, ukuze sikwazi ukwakha ingxowa sizincede. Sali khethisisa ke eligama lithi GAPA, sijonga iingxaki zethu.
Deciding What We Needed to Learn
Laqhubeka iqembu lokuxhasana, saqala amaqembu ezindlini zethu sidibana Kanye nge veki, saqalisa ukumema abanye omakhulu. Sasizibiza i-‘Psycho Social Groups,’ apho sasimamela sabelane, simamelene sibaliselana amabali. Kwi GAPA safunda kabanzi ngokuba isifo i-HIV sisebenza njani, nokuba senze njani xa onyana nentombi zethu bebuya esibhedlele besixelela okokuba bane sisigulo.
Ngesiqhelo kwezi meko besigcwala lusizi nomsindo kodwa asikwazi ukwenza lonto, kuba asenzi okulungileyo ebantwaneni bethu kwaye nathi asizincedi ukujongana nemeko. sagqiba okokuba kule mihlangano sifunde nokujongana neemeko ubomi bethu bemihla ngemihla. Kumaxesha amaninzi oko yaqala iGAPA, apho yandigcina ndiphila indinika amandla endandiwadinga ukuqhubeka.